'नागवेली' नेपाली परिवेशको कथा हो : रोमियन लिम्बु, निर्मात्री । – Namaste Filmy
'नागवेली' नेपाली परिवेशको कथा हो : रोमियन लिम्बु, निर्मात्री ।
[dropcap]रो[/dropcap]मियन लिम्बु अषाढ २७ गते प्रर्दशनहुन लागेको नेपाली चलचित्र ‘नागवेली’की निर्मात्री हुन । १० वर्ष देखि बेलायतमा रहदै आइरहेकी रोमियन चलचित्रको प्रर्दशनको तयारीमा जुट्न नेपाल आएकी हुन । एकदुइ वटा भिडियो चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी उहा कुशल नृत्यागंना पनि हुन । मनग्गै लगानी गरेर निर्माण गरिएको चलचित्र ‘नागवेली’को निर्देशक दुइ दशक भन्दा बढी समय देखि नै चलचित्र क्षेत्रमा निकै नै ब्यस्त रहदै आइरहनु भएका चिरपरिचित कोरीयोग्राफर गोविन्द राई हुन । अहिलेकी निकै नै ब्यस्त रहदै आइरहेकी नायिका हर्षिका श्रेष्ठ र चुलबुली शौरभी जैन चलचित्रकी नायिका हुन । रंगकर्मी दयाह्याङ्ग राई, श्रेष्ठ र विक्की मल्ल प्रमुख भुमिकामा देखिन्दै छन । निकै नै ब्यस्त रहदा पनि यस पंक्तिकारसाग कुराकानी गर्न भने निर्मात्री रोमियनले समय निकाल्नु भएको छ । प्रस्तुत छ उहासग गरिएको कुराकानी :
प्रश्न : तपाई नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्न कसरी उत्साही हुनु भयो ?
उत्तर : मलाई नेपाली चलचित्र, कला, नृत्य जस्ता विषयमा पहिले देखि नै रुचि रहादै आइरहेको हो । नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोचाईमा थिएा । त्यसै समयमा निर्देशक गोविन्द राई दाजुले लामो समय देखि रंगपत्रकारिता गर्दै आइरहनु भएका दिपेन्द्र लामाद्धारा लिखित चलचित्रको स्कृप्ट सुनाउनु भयो । मलाई यसको कथा, संवाद सबै कुराहरु मन पर्‍यो । यस्तो अवसर गुमाउन चाहिन मैले पनि ओके भनिदिए ।
प्रश्न : नेपाली चलचित्रका निर्माताहरु हत्तोत्साही भइरहेको अवस्थामा तपाईले के देख्नु भयो र चलचित्रको निर्माणमा लाग्नु भयो ?
उत्तर : हामी विदेशमा रहने नेपालीहरुलाई नेपाली कलासंस्कृति, गीतसंगीत, चलचित्रहरु प्रति जति रुचि र माया छ मलाई त लाग्छ स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा त्यति छैन । मलाई नेपाली चलचित्र निर्माण गर्ने रुचि र क्षमता पनि भएको र नेपाल र नेपाली प्रति संझना र माया दर्शाउन पनि नेपाली चलचित्रको निर्माणमा लागेकी हुा । सबै जना हत्तोत्साही भइरहने हो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने काम कस्ले गर्ने ? विदेशमा रहने नेपालीहरुको पनि यस क्षेत्र प्रति योगदानको आवश्यकताको छ भनेर उत्प्रेरित गर्न पनि लागि परकी हुा ।
प्रश्न : बेलायतको विभिन्न शहरहरुमा नेपालीहरु माझ चलचित्रको प्रर्दशन गरिसक्नु भएको छ । उहाहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
उत्तर : नेपाली चलचित्र यत्तिको उत्कृष्ट बन्न सकेकोमा मलाई उहााहरुले बधाइ र शुभकामना दिनु भएको छ । नेपाली चलचित्रमा पनि आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग हुन सकेकोमा उहााहरुले खुशी समेत ब्यक्त गर्नु भएको छ । म त्यसै कारणहरुबाट हौसिएर अहिले चलचित्र प्रर्दशनको तयारीको लागि नेपाल आएकी हुा ।
प्रश्न : नेपाली चलचित्रको बजार खस्कनुका के कस्तो कारणहरु रहेको पाउनु भयो ?
उत्तर : मैले नेपाली स्रोत, साधनहरुको प्रयोग गरेर निर्माण गरेको चलचित्रहरु राम्रो पाएको छु । कलाकार र प्राविधिकहरुमा समेत उत्साह र जागार रहेको पाएा । तर दुर्भाग्य, राम्रो बजेटमा नेपाली चलचित्रहरु निर्माण नहुनु र नेपाली चलचित्रको बजार ओरालो लाग्नुमा यससाग सम्बन्धित ब्यक्तिहरुको धारणा र ब्यवहार गलत पाएको छु । यहाा काम गर्न उत्साही भइरहेकाहरुलाई हौसल्ला दिादै अझ होस्तेमा हैंसे गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहीत गरिने परिपाटी धेरै हावी रहेको पाएा । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यस्तै गलत धारणा र ब्यवहार नै हो ।
प्रश्न : ‘नागवेली’मा हेर्न लाएकको त्यस्तो के प्रस्तुत गरिएको छ ?
उत्तर : यो खास गरी किशोर तथा युवाहरुको विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र हो । जीवन बााच्नका लागि समय मै युवाहरु कत्तिको सचेत हुनु पर्दछ भन्ने चलचित्रले देखाउन खोजिएको छ । नेपाली परिवेशको कथावस्तुमा आधारित यस चलचित्रले देशप्रेमको भावनालाई पनि समेटन खोजिएको छ । यो पुर्णरुपमा मनोरञ्जनात्मक र सन्देश मुलक चलचित्र भएकोले पनि नेपाली मन र नेपाली पन चाहनेहरुले नागवेली अवश्य पनि हेर्नु पर्दछ ।
उत्तर : मैले नेपाल र नेपाली संझेर चलचित्रको निर्माण गरेकी हुा । नेपाली चलचित्रहरुमा समेत नयाा प्रविधिहरुको प्रयोग भइरहेको छ । नागवेली मनोरञ्जनात्मकका साथै सन्देश मुलक चलचित्र पनि हो । मैले निर्माण गरेको चलचित्रलाई माया गरेर हल सम्म आएर चलचित्र हेरिदिएर फेरि पनि मलाई अर्को चलचित्र निर्माणमा उत्साह थपिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।